Tombo Survivor Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Tombo Survivor Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update]
Moa ve ianao tia lalao lalao ary te-hilalao lalao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Tombo Survivor Apk. Io no rindranasa filalaovana farany indrindra, izay manolotra ny mpampiasa hilalao toy ny polisy ratsy ary ny iraka dia ny ho polisy ratsy indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Araka ny fantatrao dia misy karazan'olona roa eto amin'izao tontolo izao. Misy olona ratsy ary olona tsara amin'ny asa rehetra amin'ny toerana rehetra. Noho izany, te-hiaina ny olona ny fahatsapana ho olona ratsy. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay ahafahan'ny olona mankafy sy mahazo ny traikefa tsara indrindra amin'ny olona ratsy fanahy.
Ny olona dia afaka mahita ny lafin-javatra maizina, amin'ny alalan'ity lalao ity. Ity lalao ity dia tsy maneho asa tena misy. Lalao fotsiny izy io, izay maneho ny asan'ny polisy ratsy. Noho izany, ny mpampiasa dia tsy maintsy manaja ny asa rehetra.
Izy io dia lalao mahagaga, hilalao sy hankafy. Noho izany, afaka mandinika izany miaraka isika, ary vonona ve ianao hahita ny momba an'ity app ity. Afaka mijanona miaraka aminay izahay ary hahita ny momba ity lalao ity. Azonao atao koa ny misintona ity fampiharana ity amin'ity pejy ity ary milalao azy. Andeha àry hojerentsika ny momba izany.
Topimaso momba ny Tombo Survivor Apk
Izy io dia fampiharana lalao Android, izay novolavolain'i Margo Play. Izy io dia lalao mihetsika, izay milalao ny andraikitry ny polisy ratsy. Ny iraka ataon'ny polisy dia ny ho polisy ratsy indrindra. Izy io dia manome sehatra samihafa, izay ny polisy irery no mandeha eny an-kianja.
Misy ihany koa ireo sivily hafa voajanahary azo alaina eny an-kianja. Ireo sivily rehetra ireo dia voalamina ho olona tena izy, izay manome azy ireo toetra samihafa. Ny sasany amin'izy ireo dia sivily tsotra, izay tsotra ary ao koa ny sivily manana toe-tsaina tezitra. Vonona hiady sy hamely anao koa ny olona tezitra. Noho izany, tsy maintsy haingana amin'ny zavatra rehetra ianao.
Misy iraka samihafa misy, izay tsy maintsy esorina ny sivily rehetra ny polisy. Misy fitaovam-piadiana samihafa azo alaina. Misy kibay polisy miendrika T, izay azon'ny mpilalao ampiasaina hanafika sivily. Arakaraky ny hamonoanao ny sivily dia hahazo isa bebe kokoa ianao ary hampitombo ny laharanao amin'ny lisitry ny polisy ratsy indrindra.
Ao amin'ny lalao Tombo Survivor ny kinova ankehitriny dia misy fitaovam-piadiana tokana, fa ny mpamorona dia miasa amin'ny fanavaozana ho avy. Ny fanavaozana ho avy dia hanome Tasers, pistols, basim-borona ary ny hafa. Amin'ny fanavaozana manaraka dia hisy ny sasany amin'ireo endri-javatra mahagaga kokoa ao amin'ny Lalao 3D.
Ao amin'ny lalao dia ho hitanao eny an-dalambe ny polisy avatar anao. Ny mpilalao dia tsy maintsy mifehy ny hetsika amin'ny lalana 260, izay manome fifehezana malefaka sy valiny haingana. Misy fanaraha-maso malefaka maro azo ampiasaina, ny iray dia ny fanafihana amin'ny bokotra ary ny iray hafa dia ny mamadika.
Azonao atao ny mifehy ny flip mba hialana amin'ny fanoheran'ny olona na ny empanadas koba. Ny flip koa dia azo ovaina ho front-roll, amin'ny fampiasana azy amin'ny fanjakana mihazakazaka. Ny civilizes dia hanafika miaraka amin'ny empanadas, izay tsy maintsy atao koba. Raha tratran'ny fanafihana ianao, dia ho very ny fahasalamanao, izay tsy azon'i Lukas ho sitrana ihany.
Ny Lukas dia misy amin'ny tany, izay tsy maintsy angoninao mba hahasitrana ny fahasalamanao. 50 Lukas dia ho ampy hamerenanao ny herinao. Noho izany, miadia ary esory ny sivilizasiona rehetra. Ianao no mety ho polisy ratsy indrindra amin'ny lalao rehetra. Misintona ny Tombo Survivor ary mahazo ny fifaliana tsara indrindra.
anarana Tombo Survivo
Anaran'ny fonosana com.magroplay.tombosurvivor
Developer Lalao Margo
Fanandramana milalao anjara toerana tsara indrindra
Ny Smooth Controls dia manome fanehoan-kevitra haingana
Manome rafitra torolàlana namboarina
Ny sary dia avo lenta dia manome traikefa tena izy
Ny vokatry ny fanafihana sy ny Hits
Fizarana ara-tsosialy mora
Gameplay ivelan'ny lalao
Manana lalao fialamboly bebe kokoa ho anao izahay.
Araka ny efa nolazainay tao amin'ilay fizarana etsy ambony, afaka mampidina an'ity pejy ity ianao. Noho izany, azonao atao ny misintona azy, amin'ny paompy tokana fotsiny. Tsy maintsy mikitika ny bokotra fampidinana ianao, izay hita eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity.
Miaina zava-baovao sy mahaliana amin'ny Tombo Survivor Apk. Misy olona an-tapitrisany te-hamoaka ny adin-tsainy amin'ny zavatra samihafa. Noho izany, ity no fampiharana tsara indrindra, izay manolotra ny mpampiasa hamoaka adin-tsaina. Ny filalaovana ity lalao ity dia hanome ny mpampiasa fahatsapana salama.
Lalao fotsiny io fa tsy misy fiatraikany amin'ny asa rehetra. Ka alao fotsiny ho lalao sy ho traikefa mahasalama. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Raha mila fampiharana sy lalao mahavariana misimisy kokoa dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Games, Action Tags Lalao 3D, Tombo Survivor Apk, Tombo Survivor Download, Lalao Tombo Survivor Post Fikarohana
Black Panther Apk Download Ho an'ny Android [2022 Movie App]
Clickmate Pro Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]